ရမှတ်ပေါင်းမှာ : 6
Subject: ချစ်သူထံသို့30th April 2009, 8:38 pm
ချစ်သူရေမင်းကိုရွှေနန်းထက်မှာ ထားချင်တာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒပါ.....
ချစ်သူရေ မင်းအတွက်ဆိုရင် ဘာမဆို ကိုယ်လုပ်ပေးချင်တယ် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ထဲက အစွမ်းကုန်ပေါ့......
ချစ်သူရေဒီလောကမှာ အမေပြီးရင်မင်းကို ဒုတိယအချစ်ဆုံးပဲ ......
ချစ်သူမင်းဘ၀တစ်ခုလုံး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြီး ဘ၀မှာကြုံတွေ့ ရမယ့် အခက်အခဲ တွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ ...
ချစ်သူ ကိုယ်ဟာမချစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး...ကိုယ်မင်းကိုအသက်လောက်ချစ်တယ် ...ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ဟာသူများလို မနူးညံ့ ဘူး ...
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မင်းကိုအချစ်ဆုံးဆိုတာ မင်းသိပါစေတော့ ...ချစ်သူရေ
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့8th August 2010, 6:42 pm
တစ်ကယ်တော. အချစ်ဆိုတာငါ့အတွက်တော. အိပ်မက်ထဲတောင်အလည်မလာတဲ.သင်္ချာတစ်ပုဒ်ပါပဲလေ......ဗေဒင်ကတော.မင်းဟာ.....အလွမ်းနက္ခတ် နဲ.မွေးလာတာတဲ.။ ဟုတ်လားတော.မသိဘူးကျွန်တော်လေ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအရမ်းပဲချစ်ခဲ.ဘူးတယ်...သူ.ကိုမေတ္တာစကားပြောတော.သူကလေ.... အမူပိုပိုနဲ.ကျွန်တော.ကိုတစ်လစောင်.ပါတဲ.လေ...... အဲဒီလိုနဲ......သူပြောတဲ.တစ်လလည်းရောက်တော.ရင်ခုန်စွာနဲ. သူ.မဆီက အဖြေတောင်းကြည်.တော.သူမကကျွန်တော.ကိုဘာပြောလဲသိလား....နင်.ကိုငါခံစားလို.မရဘူးတဲ.ဗျာ. အဲဒါနဲ.တောင်ဘာဖြစ်လို.များတစ်လကြီးတောင်အစောင်.ခိုင်းလဲအစောထဲကပြောရင်ရတဲ.ဟာကို.......ကြာတော.ကြာပါပြီ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ.ဒီစာလေးရော...သူဖတ်မိခဲ.ရင် ......
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2010-06-08
တည်နေရာ : မန်းတလေး
အလုပ်အကိုင်/၀ါသနာ : ကျောင်းသား
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့30th October 2010, 4:07 pm
မင်းဆိက အချစ်မရခဲ့ရင်လဲ ကိုယ်ကြိတ်မိတ်ပြိး တစ်ယောက်ထဲပဲ ကျင့်နေပါမယ်။
(ချွင်းချက်) အချစ်ကြောင့် ခံစားရတဲ့ဝေဒနာ
မင်းကိုကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ငါသိပေမဲ့ မင်းကိုယ်ကိုပြန်မချစ်သေးဘူးနော်
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့11th February 2011, 12:23 pm
ကောင်းပါ၏....ခံစားချက်လေး....၁ကယ်တော့ ချစ်သူဆိုတာ..အရင်းနှီးဆုံး သူစိမ်း၁ယောက်ပေါ့...♥♥♥
ရေးသားချက်ပေါင်း : 3
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2011-03-23
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့23rd March 2011, 8:18 pm
မူရင်းရေးသားသူ ။ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2011-04-06
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့8th April 2011, 7:19 pm
ဟန်နီ မင်းကို စတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်က သာမာန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ကြည့်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်တွေကြာလာတော့ မင်းကို ခင်ချင်လာတယ်။မင်းအပြုံးလေးတွေ၊မင်းမျက်လုံးလေးတွေက အိပ်မက်ထိ ပါလာတယ်။ဒါပေမယ့် မင်းမှာ ရည်ရွယ်သူရှိနေပြီးသားလို့ သိလိုက်ရတယ်။
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2011-06-16
တည်နေရာ : mandalay
အလုပ်အကိုင်/၀ါသနာ : စာဖတ်ခြင်းပေါ့
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့17th June 2011, 9:57 am
ဒီတိုင်းနေခဲ့ပီးမှ တစ်ခါတစ်လေ လဲ ချစ်သူလေးတစ်ယောက်လိုချင်လာမိတယ် ...သူများ တွေလို ချစ်သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပီး လမ်းတူတူလျှောက်ချင်တယ် ..... စကားတွေလဲအများကြီးပြောဖူးချင်တယ် ... ကိုယ့်ကိုလဲ အရမ်း ချစ်ပီး ဂရုစိုက်စေချင်တယ် .....။မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရက်နဲ့ပေါ့ .....။
Subject: Re: ချစ်သူထံသို့ 